Isha Qarsoon: Danyare weli ba askari ah.
Hargeysa waa magaalo ballaadhan, badh dhergay, badh qada, badh kibray badh na lagu kibro. Intaas oo xero oo ka oodan caasimadda Somaliland
Madasha Sawirrada: Toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa saddex sawir oo taariikhiya:
Durya: Waa Tuuladii laga furay saldhiggii ugu horreeyay ee SNM, waxaanay dhowr iyo toban Kiiloo-mitir koonfur ka xigtaa magaalada Allaybadey.
Sawirkan oo laga yaabo in uu qaar badan oo idin ka mid ah la yaraadaa, aniga iyo qaar badan oo kale oo ila mid ahaaba xusuus gaar ah ayuu ku leeyahay.
Madasha sawirrada: Toddobaadkan waxa ku jira laba sawir oo kala ah:
Hawl-galkii Badbaado oo ay ka muuqdaan qaar ka mid ah dadkii laga jebiyay xabsigii Mandheera 2/1/1983kii.
Xusuus mudan iyo taagni xiiso leh
“Gabagabada Bandhigga Buugta Hargeysa iyo masraxiyaddii Xusuus-Wadareed” Waa galabnimo Isniin ah, abbaaro lixdii oo daqiiqado dhiman. Jawiga magaalada Hargeysi waa mid huur ah.
Qolka Fadhiga: Sheeko gaaban
Kuma badna habeennada uu fadhiisto qolka fadhiga, waxase u caado ah inuu tago uun habeenka dan iyo damac ku jiro. Habeennada xaalku ku cakiran yahay ayuu iskula faqaa.
Isha Qarsoon: Ku eeg Hargeysa, baabuurta, jidadka iyo dadka.
Indhacadde (ma Janaraalkii aan walaayada ahayn) waa baabuur buux-dhaafshay Somaliland. Waa Toyoote loo abuuray xarragada iyo raaxada qof in yar ladan taajir is- nacay se aan ahayn.
“Dhallinta ka qayb-geli talada oo dhammaystir dimuquraadiyadda”
Waxaanu nahay ergo ka wakiil dhammaan dhallinyaradda reer Somaliland ee ku kala nool gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Somaliland.
Bandhigga Buugaagta Caalamiga Ee Hargeysa
Bandhigga Buugaagta Caalamiga ee Hargeysa waa kulan dhaqammeedka ugu doorka roon ee ka dhaca Somaliland. Waana kan ugu baaxadda weyn ee dalka gudihiisa la isugu yimaaddo.
Kooxda Aqoonyahanka Madaxa-bannaan
Waxaa durba Widhwidh ku qabsoomay laba shir oo muujiyey rajada nabad ka hirgasha deegaannada Dhulbahante.
The Consequences of Somaliland’s International (Non) Recognition
This report was prepared by Professor Christopher Clapham (Cambridge University, UK),Professor Holger Hansen (Copenhagen University, Denmark),
Madax-bannaanidii siyaasadeed & Foof-habowgii Maandeeq 1960kii – 1969kii
Halgan dheer oo qadhaadh ayay ummadda Soomaaliyeed u soo gashay xornimadeeda.
On the occasion of the 51st Anniversary of the Independence day of 26th June,
The period of 1960-1969 almost carries 45 of Timacadde’s rich and nationalistic poetry.
Ugaadhu, in kasta oo ay maanta dabar-go’ba ku dhowdahay, intii ka noolaydna la’la yahayba meel ay cag dhigto,